Itiopiya Boeing 787-9 inogamuchira kugamuchirwa kwakanaka kuMadagascar
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Itiopiya Boeing 787-9 inogamuchira kugamuchirwa kwakanaka kuMadagascar
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ethiopia Kupwanya Nhau • Madagascar Kuvhuna Nhau • nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Mushanduri mutsva wekuEthiopiya anomukira achibhururuka kuMadagascar kumhemberero yekugamuchira vanhu.
Ichishandisa imwezve chiitiko chekufamba, Ethiopian Airlines, hombe Aviation Group uye Skytrax yakasimbiswa Four Star Airline muAfrica, yaenderera mberi nehunyanzvi hwehunyanzvi; kuve neyako uye inoshanda iyo yega uye yega Africa Africa B787-9 Dreamliner ndege kumaguta akasiyana eAfrica.
Mushanduri mutsva wekuEthiopiya anomukira achibhururuka kuMadagascar kumhemberero yekugamuchirwa inodziya yakashongedzwa nekuvapo kweMinister, Ambassadors, zviremera zvehurumende uye vanobatsirana pakufamba.
Ndege yeEthiopia ichangobva kuwanikwa 787-9 Dreamliner ndege inozvirova tsika dzakakosha kune vatengi, iine kunyaradzwa kwakanyanya newindo guru mudenga, imwe gumbo kamuri, ruzha rwakadzoserwa, mwenje wemwenje uye mwando wepamusoro wemhepo pa40, 000 tsoka.
Nemabasa ayo epamusoro evatengi pasi uye mumhepo, Skytrax yakasimbiswa Four Star Airline, yekuEthiopia, yanga ichitamba chinzvimbo chakakosha mukuunza Africa pamwe nekuibatanidza nenyika kuburikidza nekurerutsa zvekutengeserana, zvekushanya nevanhu kuvanhu zvisungo.